News - Fujian Ifuru na Osisi na-ebupụ na 2020
Fujian Ifuru na Osisi na-ebupụ na-ebili na 2020
Ngalaba na-ahụ maka oke ọhịa nke Fujian gosipụtara na mbupụ nke ifuru na osisi ruru US $ 164.833 nde na 2020, mmụba nke 9.9% karịa 2019. Ọ gara nke ọma "tụgharịrị ọgba aghara dị ka ohere" wee nweta uto na-aga n'ihu na nsogbu.
Onye na-ahụ maka Ngalaba Ọhịa na Fujian kwuru na na ọkara nke mbụ nke 2020, nke ọrịa COVID-19 metụtara n'ụlọ na mba ofesi, ọnọdụ azụmaahịa mba ụwa nke ifuru na osisi esiwo dị oke mgbagwoju anya ma sie ike. Ifuru ahụ na osisi ndị na-ebupụ, bụ nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu nwayọ, emetụtala nke ukwuu. Enwere nnukwu azụmaahịa nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa mbupụ dịka ginseng ficus, sansevieria, na ndị ọkachamara metụtara ya nwere nnukwu mbibi.
Were Zhangzhou City, ebe ifuru na osisi a na-ebupụ kwa afọ na-atụle ihe karịrị 80% nke mbupụ osisi niile nke mpaghara dị ka ihe atụ. Machị rue Mee nke afo gara aga bu nkpuru ahihia kacha elu nke obodo na oge mbupu osisi. Ọnụego mbupụ ahụ wepụtara ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke mbupụ mbupụ kwa afọ. N'agbata Machị na Mee 2020, ọpụpụ ifuru obodo ahụ gbadara site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ na 2019. N'ihi nkwụsịtụ nke ụgbọ elu mba ofesi, mbupu na ngwa ọrụ ndị ọzọ, ifuru na ụlọ ọrụ mbupụ osisi na mpaghara Fujian nwere iwu nke ihe ruru USD. Nde 23.73 nke enweghị ike imezu n'oge ma chee nnukwu ihe iyi egwu anya.
Ọbụlagodi na enwere obere mbupụ, ha na-ezutekarị ihe mgbochi dị iche iche nke amụma na mbubata mba na mpaghara, na-akpata mfu enweghị atụ. Dị ka ihe atụ, India chọrọ ifuru na osisi ndị a na-esite na China ịkpọpụ iche ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ọnwa tupu ha enwee ike ịhapụ ha mgbe ha rutere; United Arab Emirates chọrọ ifuru na ahịhịa ndị e si na China bute tupu ewepụ ha maka nyocha, nke na-eme ka njem njem ogologo oge ma na-emetụta oke ọnụego nke osisi.
Ruo mgbe Mee 2020, site na mmejuputa atumatu di iche iche maka igbochi na ichikota oria, mmepe nke ndi mmadu na nke aku na uba, nsogbu na oria oria mmikpo nke ulo ejiriwo nke oma karie, ndi ulo oru ihe omimi ejiriwo nke nta nke nta wepu nsogbu nke oria ojoo a, ifuru na osisi Mbupụ abanyela n'ụzọ ziri ezi wee nweta Rise megide omume ahụ ma kụọ ọkwa ọhụrụ ugboro ugboro.
Na 2020, ifuru osisi na mbupụ osisi Zhangzhou ruru US $ 90.63 nde, mmụba nke 5.3% karịa 2019. Isi ngwaahịa mbupụ dịka ginseng ficus, sansevieria, pachira, anthurium, chrysanthemum, wdg dị ụkọ, na ọtụtụ akwụkwọ osisi na ụdị anụ ahụ ha na-amị “siri ike ịchọta n'otu akpa.”
Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2020, mpaghara a kụrụ ifuru na mpaghara Fujian ruru 1.421 nde mu, ngụkọta nhapụta nke sistemu ụlọ ọrụ niile bụ yuan 106.25, na mbupụ mbupụ bụ 164.833 nde US, mmụba nke 2.7%, 19.5 % na 9.9% kwa afọ n'otu n'otu.
Dika mpaghara imeputa igha ebuputa osisi, ifuru Fujian na osisi na ebubata Yunnan kari nke mbu na 2019, buru uzo mbu na China. N'etiti ha, mbupụ nke osisi potted ka bụ nke mbụ na mba ahụ maka afọ 9 sochiri. N’afọ 2020, ọnụ ahịa mmepụta nke ifuru akwụkwọ a niile ga - akarị 1,000. 100 yuan.